Photoshop Maimaim-poana Online Editor
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Sintomy ny Photoshop Online
Maimaimpoana ity fitaovana ity safidy hafa amin'ny Photoshop online nomen'ny sy noforonin'ireo mpamorona mba hahatsapanao ireo takiana fanovana sary anao. Andramo ity fitaovana tsotra ity alohan'ny hividianana Photoshop online.
FAQ - Photoshop Online
Andiany feno amin'ny Adobe Photoshop online ve ity?
Tsia, tsy ny tsipika Photoshop amin'ny Internet. Ity dia a mpamoaka sary maimaimpoana miaraka amina andraikitra tsotra voafetra azonao ampiasaina amin'ny Internet. Ny mpampiasa sasany aza dia miantso azy io ho Photoshop Online Editor satria azonao atao ny manitsy .psd (endrika photoshop), .xd ary .raw rakitra, ary koa endrika sary malaza hafa ao amin'ny browser-nao.
Mila misoratra anarana ve aho hampiasa an'ity fitaovana ity amin'ny Internet?
Tsia, azonao ampiasaina avy hatrany ity fitaovana ity aorian'ny fanokafana ity pejy ity.
Ny toro-hevitra omentsika:
Ity fitaovana an-tserasera ity dia tena tsotra ary tsy azo ampitahaina amin'ny Photoshop. Ny toro-hevitra ho an'ny asa mahomby kokoa dia ny mividy Adobe Photoshop amin'ny Internet.
Azoko atao ve ny mampiasa ity fitaovana ity ho an'ny tanjona matihanina?
Eny, azonao ampiasaina ity fitaovana ity amin'ny asa fototra, fa tsy misy fanampiny. Ny fampiasa azy dia mihitatra isan'andro, fa ny fiasa misy kosa dia tsy ampy hanatanterahana ny famerenana sary sary sy ny famolavolana tranonkala. Raha tsy te-hanova sary samirery ianao dia afaka manafatra serivisy fanovana sary avy amin'ny manam-pahaizana ary ataovy ao anatin'ny andro maromaro ny sarinao manomboka amin'ny $ 2 isaky ny sary.
Azoko atao ve ny misintona an'ity fitaovana maimaimpoana ity?
Tsia, azonao atao ny mampiasa an'io fitaovana io amin'ny Internet amin'ny browser rehetra. Raha te hampiasa ny kinova amin'ny birao amin'ny solosainao dia mila misintona ianao Adobe Photoshop online amin'ny tranokala ofisialin'ny Adobe ary ampiasao izany ivelan'ny Internet.
Fampianarana Photoshop Online: